Ibhizinisi Lomphakathi, i-Quiet Revolution | Martech Zone
Ibhizinisi Lomphakathi, i-Quiet Revolution
NgoMsombuluko, Mashi 19, 2012 NgoLwesibili, ngo-Mashi 20, i-2012 UMarty Thompson
Imithombo yezokuxhumana kanye nobuchwepheshe bezenhlalo manje sekuyingxenye ebalulekile yokuthi izinkampani zenza kanjani ibhizinisi. Sekuhlanganiswe ngokuphelele futhi kwahlanganiswa emizamweni yethu yokumaketha. Abathengisi bedijithali abakwazi ukukhuluma ngokuqukethwe, i-SEO, ukwenziwa kwewebhusayithi, i-PR. Amakhasimende, noma ngabe ayakuqonda noma cha, manje anendima entsha ngokuphelele angayidlala ngaphakathi kwesimo sebhizinisi. Badlala indima ehluke kakhulu kubakhangisi abaningi bamaqhinga ake avikelwa ngemuva kodonga lokuthula.
Njengabakhangisi asinakukwazi ukucabanga “ukuba nomphakathi”Njengento ehlukile kweminye imisebenzi yethu.
Leli qiniso lomphakathi manje selingena kwesinye isigaba. Izinhlangano manje sezigxile emizamweni yazo yokuthi zingathuthuka kanjani ngaphakathi, zisebenzisa izinzuzo zale nguquko entsha yokubambisana kwezenhlalo.
Njengentuthuko eyenziwe ku-ERP, CRM, ukumaketha okuzenzakalelayo, nakwezinye izindawo, ibhizinisi lomphakathi kungenye inguquko ethulile, eyenzeka kancane ngezikhathi ezithile, ngokushesha kwabanye.
Impikiswano yokuthi ibhizinisi lomphakathi lisho ukuthini, nokuthi yiliphi inani “elinikeza”, uma likhona, liyaqhubeka eminye imibuthano. Kepha ngombono wami, imele enye inguquko ethule. Asivukanga nangelilodwa ilanga sathola i-IBM, i-SAP, i-Oracle, iSalesforce, nezinye, zakhiwe ngokushesha, zilungele ukuthunyelwa. Vele ubuze laba badlali bebhizinisi, bazokhuluma izindaba eziphoqayo zokuthi kungani ezenhlalo kuyinto enkulu elandelayo. Bamukela ukubambisana kwezenhlalo njengokuthile okufanele. Ithemba lami ukuthi sonke singasebenzisa leli thuba hhayi kuphela ukuletha inani elengeziwe lebhizinisi, kepha futhi nokunikeza indawo entsha lapho kungagujwa khona ama-nuances wokusebenzisana kwabantu okuyinkimbinkimbi. Yebo, ngikholelwa emandleni wama-geek.
Lawo mabhizinisi azohlomula kuqala kule mizamo angabonga kakhulu labo abahlanganise kahle imisebenzi yezenhlalo ekusebenzeni kwabo kwamakhasimende nasekusekeleni, ukumaketha, nakwezinye izindawo ezisebenzayo. Kubandakanya labo abenze utshalomali olubonakalayo ekwakheni izinkundla zomphakathi ezinekhono emphakathini, izinsizakalo kanye namaqembu okusekela, izinkundla zokuphatha ulwazi eziqinile, nalabo abathathe umqondo weCRM yezenhlalo, futhi bakhela phezu kwayo. Ngabe ibhizinisi lezenhlalo liyi-reashash nje yale mizamo? Ngicabanga ukuthi impendulo ithi cha, kepha okuningi okufundiwe, nokuthi okuningi ukubambisana kwezamabhizinisi kuzobukeka kuzobongwa ngale mizamo.
Ngakho-ke, kuthiwani ngebhizinisi lakho? Ngabe uziqonda ngokugcwele izinzuzo zesu lokukhangisa elihlanganisiwe elibandakanya izingxenye zomphakathi ezihlakaniphile? Iyini imicabango yakho ngalokho okushiwo ukuba yibhizinisi lomphakathi?
Tags: Ukuqashwa KomphakathiDK New MediaUMarty ThompsonIbhizinisi Lezenhlalakahlesocial media
Umlando Wezinguquko ze-Google Algorithm
Mar 23, 2012 ku-9: 55 PM
Ngicabanga ukuthi sineminyaka eminingi ukuthi silungise imigomo yethu yezinkampani ebhizinisini lezenhlalo. Sisathuthukisa iminyango yangaphakathi ngenqubo yolayini wokukhiqiza lapho iqiniso ukuthi yonke iminyango iba nomthelela kumthelela womkhiqizo ezinkundleni zokuxhumana - kusuka ebuholini, kuye kwezenhlalo, nasekukhangiseni… wonke umsebenzi ubamba iqhaza. Ngeshwa, akuyona indlela izihlahla zethu zamandla ezakhiwe ngayo, noma kunjalo. Siyaqhubeka nokuncishwa ulwazi esiludingayo… futhi esikufunayo!
Ukufika lapho kuzoba mnandi, noma kunjalo!